Skål Anopa Mutero kuna Walter Kenneth "Ken" Whitty
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Skål Anopa Mutero kuna Walter Kenneth "Ken" Whitty
Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Akasiyana Nhau
Zviri nekusuwa kwakanyanya kuti kupfuura kwe Skålleague Ken Whitty, MD, Flow Inter Co Ltd., muparidzi wePaulaner Beer uye zvinwiwa zvakaziviswa.
Walter Kenneth “Ken” Whitty, 1952 - 2021, apfuura mushure mekurwa negomarara.
Kambani yaKen yaive yakatsigira kwenguva refu Skål muBangkok nePattaya, Thailand.
Mutungamiri weSkål International, Andrew J. Wood, vakapa rumbidzo panguva yemhemberero yekupisa vaBuddhist yakaitwa nezuro kuWat Sri-Iam muBangkok.
Pazera ramakore 69 Ken anga achirwisa kenza mumakore achangopfuura. Akazvarwa muWaterford, Ireland, Ken akatanga kusvika kuThailand mu1999 uye nekukurumidza akamisikidza Danmark Co Ltd. uye Flow Inter Co Ltd., ivo voga vaparadzi muThailand vane mazita anozivikanwa saPaulaner, Hopf, Hacker-Pschorr, uye maFuller's Beers . Pamwe chete neCornish Orchard Cider uye Abbona Wines. Ken aive MD uye Khun Kanpitcha (Toi), uye mudzimai waKen ndiye Executive Director. Vakavaka bhizinesi rakabudirira kuunza yakakurumbira madoro edoro nezvinwiwa. Iyo kambani nerubatsiro rwayo rwakasimba yakave yakafanana neOKTOBERFEST muno muThailand.
Flow Inter Co Ltd. zvakare iri refu-nguva mutsigiri we Skål muBangkok uye Pattaya, achigara achitsigira nhengo uye misangano kwemakore gumi nemana naPaulaner Beers uye zvinwiwa zvakasiyana.
Andrew J. Wood, Mutungamiri we Skål International, panguva yemhemberero yechiBhudha yekupisa yakaitwa nezuro kuWat Sri-Iam muBangkok, yakapa rumbidzo pfupi. “Nekunyemwerera kwake kwoushamwari, Ken aigara achienda kumitambo yezvemaindasitiri zvizhinji zvaitsigirwa nekambani yake. Ingave yeBritish Thai Chamber of Commerce (BCCT) kana yeGerman Chamber (GTCC) nevamwe, kana chiitiko cheindasitiri yekufambisa neyekushanya - seSkål kana FBAT - Ken, Toi, nechikwata zvakatsigira, ”akadaro Wood.
"Ken anosiya kumashure nhaka yakasimba uye tinosvika kuna Toi nemhuri nerudo nerutsigiro panguva ino. Ken aiyemurwa zvikuru uye achasuwa zvinosiririsa nesu tese ane hupenyu hwaakabata. Tine shungu pamoyo uye nekusuwa kukuru tinochema kufa kweshamwari yedu. ”
Skål isangano rehunyanzvi revatungamiriri vevashanyi pasirese rinokurudzira kushanya kwepasirese uye hushamwari. Ndiro chete boka repasi rese rinobatanidza matavi ese eindasitiri yekufambisa neyekushanya. Nhengo dzayo, mamaneja eindasitiri nevatungamiriri, vanosangana munzvimbo dzenyika, dzenyika, dzenharaunda, uye dzekunze kuti vakurukure nekutevera misoro yevanofarira zvakafanana.